Ndeipi Tekinoroji Yabviswa neMafoni? | Martech Zone
Tiri kuuya pamusoro pegumi regumi rekuzvarwa kweiyo iPhone, yakatangwa June 10th, 29.
Kunge chero psychopath inogutsa, mafoni emafoni anokwanisa kuisa kumberi kunodikanwa. Ivo vane hushamwari, vanobatsira uye vanoita kunge havangakuvadze nhunzi. Nguva yose iyi ivo vane mhondi dzinoshungurudza avo vanofuridza wachi dzemaoko muhope dzavo uye nekuona kuti yako GPS system haina kuzombowanikwa zvakare. James Pelton
Izvo zvinokodzera chete kuti Meseji Yemavara MaAlerts anotangisa izvi muurayi infographic: Cell Cell Serial Killer - Iwo maGajeti ari Kuuraiwa nemaSmartphone kupemberera kupera kwetekinoroji dzakawanda dzakapihwa chikuva chinoshamisa muchanza chemaoko edu. Heano gumi matekinoroji akaurayiwa nekuda kwekushamisa kwedu kunoshamisa mafoni
Alarm Clock - 61% yevanoshandisa smartphone vanoti foni yavo yakatsiva wachi yavo.
Watch - Smartwatch yakatumirwa yakapedzisa swiss wachi yekutumira kekutanga mu 4th quarter ya2015.
Fitness Fitness Trackers - 58% yevashandisi veApplease vakatorodha kanenge kamwechete musimba app.
MP3 Players - zvakachipa data zvirongwa uye zvekushambadzira masevhisi pane mafoni atora.
Nongedzera uye Pfura Kamera - mafoni emafoni akaverengera anopfuura makumi mashanu muzana emifananidzo yakagovaniswa kubvira 50, panguva imwe chete kudonha kwakakura mune yakatarwa lens kamera yekutengesa.
Camcorder - Pamwe nemakamera, camcorder yekutengesa iri kuramba ichidonha zvakare.
GPS neMepu - TomTom mari inoburitswa ne2 / 3rds mumakore maviri, uye Google Mepu ikozvino yave nevashandisi bhiriyoni (kunyangwe ini ndingasarudza Waze).
Nhare dzefoni - 41% yedzimba haisisina nharembozha uye kwasara zana chete mafoni ekubhadhara muHong Kong.
Newspapers - Smartphones dzakatsiva mapepanhau senzira yekuverenga zvinyorwa zvevarume muchimbuzi.
Gameboys - Mobile mutambo wemari inowanikwa katatu zvakapetwa nemaoko anonyaradza.
matochi - Iyo inoshamisira vashandisi veApplephone
Address Book - Akaurayiwa nemabhuku ekutaurirana anoenderana nevatinosangana navo uye ese edu epamhepo masevhisi.
Voga Vhidhiyo Vatambi - Pamwe chete nemumhanzi, iyo smartphone yave yedu inotakurika terevhizheni. Uye makambani emakambani ari kupindura, pamwe nekushambadzira masevhisi.
Voice Recorder - Rangarira chirevo? Neniwo.
Calculator - Iwe unoziva kuti wakamboishandisa kuverenga tip kana maviri.
Notepad - Nyora pasi zviyeuchidzo uye zvinyorwa.
Photo Album - Wakamboona mufananidzo wembwa yangu, Gambino? Ini ndinogona kunge ndine zana ravo pa iPhone yangu.
mamiriro okunze - Hapana chikonzero chekuvhura nhau, iyo Weather Channel inowanikwa muchanza chedu.
Nhare Dzisingatauri - Hausi mbeveve kana ukashandisa pafiripi foni, ndinokuvimbisa… asi hauchabatika.
More - Tinogona kuzoziva mune ramangwana kuti iro remagetsi remagetsi (EMR) rinoburitswa nemasokisi efoni ari kukonzera zvimwe zvinhu kune zvakatipoteredza… ramba wakatarisana.
Tags: bhuku rekeroalarm clockkarukuretaCamcorderkamera +dictaphonemafoni asingatauriremagetsi nemwaranziemrfitness trackermatochivakomanaVanaChiremba vezvirwere zvesemutambo wemitambofoni yekumbalandlinenzvimbo inemapmp3 mutambiMusic PlayerMapepanhaunotepadbhadhara fonivatambi vevhidhiyo vegapikicha albumkunongedza nekupfuramazwi ekurekodhatarisamamiriro okunze
inMotionNow Inotangisa PaInternet Proofing Workflow Yekushambadzira Maemail
Maitiro Ekuyera uye Kuvandudza Yako Twitter Kushambadzira Isu